महिलामा देखिन सक्ने क्यान्सरका लक्षण
मानिसको शरीरमा रहेका कोषिकाहरु अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै जानु नै क्यान्सर रोग प्रकोपका रुपमा फैदिँदै छ । क्यान्सर शरीरको टाउकोदेखि खुट्टासम्म हरेक ठाउँमा लाग्ने सम्भापना हुन्छ । कतिपयलाई क्यान्सर सरुवा रोग हो । भन्न गलत भ्रम छ ।
क्यान्सर सरुवा रोग होइन । तर, हरीरको एउटा अंगबाट क्यान्सर फैलिएर अर्को अंग बिर्गान भने सक्छ । ९० प्रतिशत क्यान्सर गिर्खाबाट फैलिन्छ । शरीरको घाँटी, काखीमुनी हुने गिर्खाबाट क्यान्सर फैलिएको पाइन्छ । त्यसैले हाम्रो शरीरमा यस्ता गिर्खा छन् भने तुरुन्तै देखाउनुपर्छ । शरीरमा क्यान्सर देखिने सम्भावना र सजगताका लागि अपनाउनुपर्ने बारे समान्य जानकारी ।
यदि तपाईले स्तनमा गोलीगाँठा भेटाउनुभयो भने के गर्नु हुन्छ? क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ या सक्दैन एकचोटी पक्कै सोच्नुपर्छ। त्यसैगरी यदि घाँटी सुन्निएको छ, छालामा निको नहुने डल्लो, कुनै अंगको निको नहुने दुखाइ आदि समस्या आइरहेको छ भने सजगता अपनाउनुपर्छ। यो टिप्समा नाक,कान तथा घाँटी,स्तन, रगत, फोक्सो, छाला तथा विभिन्न प्रकारका क्यान्सरका लक्षणहरु देखाउन खोजिएको छ।
हड्डी दुखाइ घाउचोटपटक, संक्रमण तथा हड्डीसम्बन्धी समस्याले हुन सक्छन् तर यी क्यान्सरका लक्षण पनि हुन सक्छन्। यदि तपाईको ढाड, कम्मर, करङहरु दुख्छ भने सजग हुनुपर्छ। हाडजोर्नी दुखेर ज्वरो आउने, थकान महसुस हुने वा तौल कम भएको छ भने त्यो ल्युकेमियाको लक्षण हुन्छ सक्छ। बोन म्यारो वा रगतको क्यान्सरका लक्षण हुन सक्छन्।
छालाका क्यान्सरका बिरामी पछिल्लो समय धेरैदेखिएका छन्। जसको मुख्य कारण सुर्यको अल्ट्राभ्वाइलेट किरणसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क भन्ने देखिएको छ। यदि गाला तथा नाकमा गोलो मोती दाना जस्तो डण्डिरफोर देखियो र त्यसले निको हुने छाँटकाट नै देखाउँदैन भने क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ। ६ देखि ८ हप्ता सम्म त्यो दाना रहिरह्यो भने उपचार गराउनुपर्छ।
सुन्दा पत्यार लाग्दैन तर छाला लामो समयसम्म चिलाउनु पनि क्यान्सरको लक्षणमध्येको एक हुन सक्छ। लिम्फोमाको लक्षण हुन सक्छ। धेरै जसो छालाको समस्या भए छालारोग विशेषज्ञ कहाँ जाने भेटिन्छन्। यदि तपाईले पहिले छालारोगकोमा गइसक्नुभएको छ र सुधार भएन भने क्यान्सररोग विशेषज्ञसँग जचाउन सकिन्छ।
यदि तपाईको कान लगातार दुखिरहेको छ र कुनै संक्रमण पनि भएको छैन भने त्यसको संकेत के त? त्यो कानको समस्या नहुन सक्छ। त्यो दुखाइ कानको नसाबाट टाउको वा घाँटीसम्म पुगिरहेको हुन सक्छ। जुन मुखको क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छन्। त्यसैगरी जिब्रोको पछाडी र तन्सिलमा पनि क्यान्सर देखिन सक्छ।
अनियमित महिनावारी हामोर्नको गडबडीले हुन सक्छ। तर कहिलेकाहीँ महिनावारी गडबडी गर्भासयको क्यान्सर पनि हुन सक्छ। मेनोपजपछि पनि रगत बग्नु सामान्य होइन। त्यसैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। चिकित्सकहरुले बताए अनुसार गर्भासयको क्यान्सर धेरैजसो पहिलो स्टेजमा थाहा पाइन्छ र निको हुने धेरै सम्भावना हुन्छ।
पिसाबको समस्या धेरै जसो महिलामा देखिने गरेको । विशेषगरी यसको संक्रमण हुने र टाइप टु डायबेटिजले गर्दा पनि पिसाबको समस्या महिलाले भोग्छन्। पिसाबको समस्या पत्थरीको संकेत पनि हुन सक्छ। उदि पिसाबमा रगत देखिएको छ भने त्यो मुत्रथैली वा मिर्गौलाको क्यान्सर हुन सक्छ।
यदि तपाईको दिसामा रगत देखियो(पाइल्स रोगबाहेक) भने त्यो ठूलो आन्द्राको क्यान्सर हुन सक्छ। एनिमियाले तपाईलाई थकान महसुस गराउने, चक्कर लगाउने जस्ता लक्षण गराउन सक्छ जुन क्यान्सरका लक्षण हुन सक्छन्।
सबै गोलीगाँठा र डल्लोहरु क्यान्सरको लक्षण होइनन्। घाँटीमा आउने सुन्निएको डल्लो कुनै संक्रमण वा बढिरहेको ट्यमुर हुन सक्छ। यदि घाँटीको बीच भाग जहाँ थाइरोड हुन्छ त्यहाँ सुन्निएको छ भने क्यान्सरको परिक्षण भने गराउनुपर्छ। महिलामा थायराइड क्यान्सरको सम्भावना पुरुषभन्दा ३ गुणाले बढी हुन्छ। खुसीको कुरा भने यो क्यान्सर धेरै छिटो फैलिँदैन र यसको उपचारमा निको हुने धेरै सम्भावना हुन्छ।
यदि स्तन अरुबेला भन्दा असामान्य देखिन्छ जस्तै दुखाइ, रातोपन, सुनिएको छ भने स्तनमा संक्रमण भएको हुन सक्छ। स्तन क्यान्सरको पनि उस्तै लक्षण हुन्छन्। कुनै–कुनै महिलामा स्तनको छाला एकदम बाक्लो हुँदै जाने हुन्छ त्यो पनि स्तन क्यान्सरको लक्षण हो। यो एकदम छिटो फैलन सक्छ।
चिकित्सकहरुले बताए अनुसार क्यान्सर रोग समयमै नै पहिचान गर्न सके निको हुने रोग हो। यदि तपाईलाई यी मध्ये कुनै लक्षण पनि देखिएका छन् भने विशेषज्ञ डाक्टरसँग जचाइँहाल्नुस्।
यो पनि पढ्नुहोस :-८ घण्टाभन्दा कम सुत्नेलाई मानसिक समस्याको खतरा
दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशा (डप्रेसन)को समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
सुत्ने समयावधि र मानसिक अवस्था बीचको सम्बन्धको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कम सुत्नेमा बढी मानसिक समस्या र चिन्ता देखिएको सो अध्ययनमा पत्ता लागेको हो।
आठ घण्टा भन्दा कम सुत्ने मानिसहरुमा चिन्ता, कुन्ठा, तनाव र निराशा धेरै आउने गरेको सो विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित मेडिकल जर्नलको पछिल्लो संस्करणमा छापिएको समाचारमा जनाइएको छ।
त्यसैगरी सो अनुसन्धानले सुत्ने समयमा अनियमितता भएका मानिसहरुलाई ध्यान एकत्रित गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको पाइएको पनि बताएका छन्।
सुताई नपुगेका मानिसहरुमा आउने नकारात्मक सोचाईका कारण ध्यान एकत्रित गर्न पनि गाह्रो हुने गरेको अनुसन्धानकर्ताहरुको निष्कर्ष छ।
अनुसन्धान टोलीका एकजना सदस्य जाकोब नोटाले नकारात्मक सोँचका कारण उत्पन्न परिस्थितिले मानिसलाई तनावका साथै मानसिक असन्तुलनतर्फ समेत उन्मुख गराउनसक्ने खतरा देखिएको बताए।
अनुसन्धानकर्ताहरुले मानसिक तनाव र चिन्ता कम गर्न नियमित रुपमा र दिनमा कम्तीमा आठ घन्टासम्म सुत्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।-स्वास्थ्य खबर